Ukufanisa nesibusiso ukucula noDeborah - Ilanga News
Home Izindaba Ukufanisa nesibusiso ukucula noDeborah
UDEBORAH Fraser ushone sebehlanganise ingoma noKhuzani Mpungose, ongumculi kamaskandi.
ISILOMO sikamaskandi, uKhuzani Mpungose, sithi kufana nokuthi umshiye nesibusiso umculi wegospel, uDeborah Fraser, odlule emhlabeni ngeSonto ngemuva kokuxinwa wukugula. UKhuzani ubesanda kwenza ingoma nalesi silomo obekulindeleke ukuthi iphume kwi albhamu yaso kulo nyaka. Ngokusho kuka Khuzani, ngesikhathi ecelwa ukuzokwenza ingoma noDeborah, wazizwa ebusisekile kakhulu. “Umculo kaDeborah ngikhule ngawo futhi ubuhlale ungibusisa. Ukuthola isimemo sokuzokwenza ingoma naye, akubanga yinto engiyithatha kancane.
“UDeborah ubeyinkakha hhayi eNingizimu Afrika kuphela, kodwa nakwamanye amazwe.” UKhuzani uthi izindaba zokudlula kwale nkakha kazehlanga kahle kuyena, ikakhulukazi njengoba engasakwazanga nokuthola ithuba lokuthi bayicule ndawonye phambi kwabantu ingoma yabo. “Bengikulangazelele ukuphuma kwale ngoma futhi benginesifiso sokuthi sibe ndawonye esiteji njengoba ngesikhathi siyiqopha, kwaba mnandi sengathi singabangani bakudala,” kusho yena. Uthi ukuthatha njengesibusiso ukuthi alithole ithuba lokwenza ingoma noDeborah ngomzuzu wokugcina wempilo yakhe.
“Le ngoma kimina ifana nesibusiso angishiye naso ukuthi ngesikhathi efikelwa wukuqopha le albhamu okungeyokugcina yakhe esadla anhlamvana, acabange ukungifaka kuyona,” kusho yena. UKhuzani uchaze uDeborah njengomama obekhululekile, onothando futhi enemfudumalo. Kuyona le albhamu engakaphumi kodwa ebisiphothuliwe, uDeborah unengoma abeseyenze noBig Zulu, naye okhala esifanayo ngalesi sehlo. UBig Zulu utshele ILANGA ukuthi kuzwelile ukudlula kwale nkakha, wathi uyathobeka ngokuthola ithuba lokusebenza nayo. “Akukaze kwehle kahle ukudlula komuntu emhlabeni kanti bengisalindele ukuba naye esiteji, sizwise abantu umsebenzi wethu esiwenze ndawonye.
“Emndenini nakubo bonke abasondelene noMam Deborah, ngithi alwehlanga lungehliyo,” kusho uBig Zulu. Uchaze ukuqopha noDeborah njengento eyohlale njalo isenhliziyweni yakhe. Isikhulu esiphezulu se-Universal Music, okuyinkampani abengaphansi kwayo uDeborah, uKenny Tlale, sikuqinisekisile ukuthi konke bese kumi ngomumo ngokuphuma kwale albhamu obekulindeleke ukuthi iphume maphakathi nonyaka. “Izingoma bese sizihlanganisile, sesilinde ukubheka ukuthi iyiphi esizofolosa ngayo futhi sibheke nosuku oluqondile ebesizoyikhipha ngalo ngokusemthethweni,” kusho uTlale.
Uphinde wakuqinisekisa ukusebenza kukaDeborah noKhuzani noBig Zulu kule albhamu. UDeborah ubengomunye wabaculi be gospel abebekwazi ukucula nabaculi bezinhlobo ezahlukene zomculo. Useke wacula noDavid Masondo wodumo lweSoul Brothers, uBrenda Fassie, uSipho Mbhele nabanye. Kulindeleke ukuthi namhlanje ngoLwesine, kube nenkonzo yesikhumbuzo eThe House of Treasure Ministries,eRispark, eGoli. Ngesikhathi sokuloba ibingakaphothulwa imininingwane yesikhumbuzo yaseThekwini okulindeleke ukuthi ibe kusasa ngoLwesihlanu. Inkonzo yomngcwabo kaDeborah izoba seThe Station ngaseDurban Station, ngaphambi kokuthi ayobekwa endlini yakhe yokugcina, emathuneni aseHillcrest, eThekwini.
Previous articleUdwebele inkantolo isithombe ngokutholakala kwemoto kanjiniyela
Next articleUSGQEMEZA UMISIWE OKHOZINI FM